एमसीसीलाई विरोध या समर्थन गर्नेले एकचोटी राम्ररी सोचौं है » नयाँ सन्दर्भ
एमसीसीलाई विरोध या समर्थन गर्नेले एकचोटी राम्ररी सोचौं है
२०७८ फाल्गुन ९ गते सन्दर्भ समाचारदाता
अमेरिकन आर्थिक सहयोग एमसीसीलाई लिएर पछिल्लो समय नेपालको राजनीति विभिन्न समूहमा विभक्त भइरहेको छ । खासगरी सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच नै तीव्र मतभेद देखिँदै आएको छ । कांग्रेसले एमसीसी संसद्‍मा टेबल गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ भने माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने अडान राखेको छ । त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने यसबारे ठोस निर्णय बाहिर ल्याएको छैन । देशका यी तीन राजनैतिक शक्ति बिचको मतान्तरले देशभित्र अन्तर कलह बढ्ने संकेत प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ । यसैगरी यस अन्तरकलह बढाउन साना राजनीतिक दलले सडकलाई रोजिसकेका छन् । बास्तवमा यस विवादको जड अमेरिका र चीन बीचको शीत युद्ध रहेको प्रमाण यी दुई देश बिचमा चलिरहेको बक्तव्यवाजी र नेपालप्रतिको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपको घटनाले प्रमाणित गरिरहेको छ ।
हरेक नागरिकले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तरनिहित विषयवस्तु हो र सबैलाई आफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक राख्न छुट हुनुपर्छ भन्दै अमेरिकाले हिंसा वा हिंसा भड्काउने किसिमका विचार नस्वीकार्ने बताएर घुमाउरो पाराले नेपालीप्रति चेतावनी दिने प्रयासमा चीनलाई तर्साउन खोजिरहेको छ भने चीनले बलजफ्ती कूटनीति भनेर यसको विपक्षमा रहेको प्रष्टपार्दै अमेरिका बिरूद्ध लाग्ने नेपालीहरूलाई आड दिएर एमसीसी रोक्न पहल गरिरहेको अवस्थाले अमेरिका र चीनको कलहमा नेपाली चेपिने अवस्था आइसकेको छ ।
एमसीसी प्रकरणले नेपाली मन विभाजित भएर पक्ष र बिपक्षमा जनमत निर्माण हुनु दुःखद अवस्था हो । एमसीसीलाई लिनु हुँदैन थियो भनेर हल्ला मच्चाउने कम्युनिष्ट घटकले यसबाट के के बेफाइदा हुन्छ प्रष्ट भन्न सकेकै छैनन् । यस्तै पूर्व राजाका समर्थकहरू यही धमिलो राजनीतिमा एमसीसीलाई बाहना बनाएर कतै राजतन्त्र फर्काउन पाइन्छ कि भन्ने दाउमा देखिन्छन् । टुक्रे कम्युनिष्टहरू आफूतिर जनमत बढाउन सकिन्छ कि भनेर नागरिकमा एमसीसीको विरोधी भावना फालिरहेका छन् । यही बिचमा चीनले पनि कम्युनिष्टको फेरो समाएर नेपालमा अमेरिकी बिरोधी जनमतको बल बढाउने प्रयास गरिरहेको अवस्था छ । यी सवै घटनालाई निहाल्ने हो भने एमसीसीलाई नेपालको हितमा नभएर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ वा दलीय लाभका लागि नेपालीले बिरोध गरिरहेको झलकबाट प्रष्ट हुन्छ ।
यदि स्वाभिमानी र देश भक्तहरूले एमसीसीलाई बिरोध गरिरहेका हुन् भने चिनियाँ दुतावासको शरणमा परेर नेपालको आन्दोलन अगाडि बढ्ने थिएन । यही आन्दोलनको झलक देखाएर चीनले अमेरिका तर्साउने प्रयास पनि गर्ने थिएन । खासगरी कम्युनिष्ट भन्न रूचाउने विभिन्न माओवादीहरू चीनबाट परिचालित भएको प्रष्ट हुँदै छ भने राजतन्त्रका पक्षधर चीन र अमेरिका बिचको द्वन्द्व बढाउन दुवैतिर पसेर दोहोरो रोल खेल्दै व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा गराइ राजतन्त्र फर्काउन पाइन्छ कि भन्ने दाउमा छन् । एमसीसीलाई स्वार्थ अनुकुल उपयोग गर्ने प्रयासमा रहेका टुक्रे दलहरूले नेपाली नेपाली बिचमा रक्तपातको वातावरण सिर्जना गर्दै छन् ।
‘एमसीसीलाई मात्र किन विरोध गर्ने ? कुनै पनि विदेशी सहयोग लिनु हुँदैन भन्न सकेको खै ? आफ्नै प्रयासमा देशको विकास गरिनु पर्दछ भन्ने विचारले कहाँ प्रवेश पाएको छ ? यसकारण पनि एमसीसीलाई विरोध गर्नेहरूको नियत प्रष्ट छैन, भन्न सकिन्छ । अहिले विरोधको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीको बृहद रूप रहँदा नेपाल प्रवेश पाएको एमसीसीलाई विरोधरूपी घेराबन्दी पनि यही दलले नै किन गर्दै छ ? नेपालीहरूले खोजिरहेको उत्तर दिनु पर्छ कि पर्दैन ? हिजो ठूलो दल भएर सत्ता सम्हाल्दा एमसीसीलाई नेपाल ल्याउन हतारो हुने अनि आज टुक्रा टुक्रा भएर शक्ति कमजोर भएपछि एमसीसीलाई राष्ट्रघाती बनाएर राजनीति गर्ने दलीय नैतिकता माओवादीसित छ त ? विरोध या समर्थनमा विभक्त नेपालीहरूले सोच्नै पर्छ । अदुरदर्शी राजनीतिको पछाडि दौडेर आफूलाई मुर्ख बनाउन स्वाभीमानी नेपालीलाई सुहाउदैन ।
← पत्रकार माया पकुवालको ५४ वर्षको उमेरमा निधन, आजै मेची घाटमा दाहसंस्कार गरियो
क्यान्सर पीडितलाई बाह्रदशी जेसीजद्वारा सहयोग →